कोरोना भाइरस संक्रमणपछि शरीरमा के हुन्छ ? – www.bethanchokkhabar.com
कोरोना भाइरस संक्रमणपछि शरीरमा के हुन्छ ?
सोमबार, माघ २०, २०७६ | १५:२७:२३ |
नयाँ कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्ष चिकित्सकहरूका लागि अनिश्चिततातर्फको यात्रा भइरहेको छ। यो भाइरसले शरीरमा कसरी आक्रमण गर्छ? यसका लक्षणहरू के हुन्? सबैभन्दा गम्भीर रूपमा बिरामी पर्ने वा ज्यान नै गुमाउन सक्ने जोखिममा को हुन्छ? यसको उपचार कसरी हुन्छ?
ती सबै ९९ बिरामीलाई अस्पताल लगिँदा निमोनियाको संक्रमण देखिएको थियो।
५ जनाको घाँटीमा संक्रमण भएको थियो
भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि उनको फोक्सोले काम गर्न सकेन र उनले सास फेर्न छाडे। अस्पताल भर्ना भएको ११ दिनपछि उनको मृत्यु भयो। अर्का बिरामी ६९ वर्षीय पुरुष थिए। उनलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो।
उनलाई एउटा कृत्रिम फोक्सोको सहायतामा राखियो। गम्भीर निमोनिया र शरीरभरि संक्रमण फैलिएपछि रक्तचाप ह्वात्तै घट्यो र उनको मृत्यु भयो।
जनवरी २५ सम्ममा ती ९९ बिरामीमध्ये ५७ जना अझै अस्पतालमा छन्। ३१ जना घर फर्केका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसको अर्थ यस रोगको मृत्युदर ११ प्रतिशत हो भन्ने चाहिँ होइन। अस्पतालमा भएका केहीको अझै ज्यान जान सक्छ भने सामान्य लक्षण देखिएका धेरै मानिस अस्पताल नै नआएका पनि हुन सक्छन्।
वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ संक्रमणमा आधारित
५९ वर्ष सङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर
८९ प्रतिशत संक्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन्
५६ प्रतिशत सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष
५५ प्रतिशत नयाँ वर्षअघि भएका संक्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध
यो नयाँ भाइरसलाई 2019-nCoV नामकरण गरिएको छ। ह्वानेनस्थित एउटा समुद्री खाद्यपदार्थ बजारमा जिउँदै बेच्न राखिएका जीवबाट उक्त भाइरस फैलिएको अनुमान छ। संक्रमण भएको पहिला पुष्टि भएका ९९ जनामध्ये ४९ जनाको उक्त बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। दुई जना सामान किन्न गएका ग्राहक थिए भने ४७ जना त्यहीँ काम गर्थे।
पुरुषहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचार गरिनुपर्छ। सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले गर्दा प्रकोपको आरम्भमा पुरुषहरू भाइरसको संक्रमणमा धेरै परेका हुन सक्छन्
ती ९९ जनामध्ये धेरै जना पहिले नै अन्य केही रोगबाट पीडित थिए। त्यसैले कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीका भएको हुनाले भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्छ। ४० जनाको मुटु कमजोर थियो वा रक्तनलीहरू बिग्रिएका थिए। उनीहरू हृदयरोग र स्ट्रोकजस्ता समस्याबाट पीडित थिए भने १२ जनामा मधुमेह थियो। अन्नपूर्ण अनलाइनबाट